अमेरिकामा बस्ने नेपाली महिलाले सुनाए अनुभव र संघर्षका कथा
२०७५ फाल्गुण २२ बुधबार १३:३६:००
विजय थापा,अमेरिका ।
अमेरिकाको टेक्सस राज्यको ड्यालस शहरमा एक दिवसीय प्रथम नेपाली महिला उद्यमशीलता तथा नेतृत्व सम्मेलन २०१९ सम्पन्न भएको छ । सम्ममेलनमा सहभागी महिलाहरुले संघर्ष र सफलताका कथाहरु सुनाएका थिए । नेपालबाट अमेरिकामा रहेर अध्ययन सँगै उच्च ओहदामा कार्यरत महिलाहरुले आफ्ना अनुभाव साटासाट गरेको हुन् ।
सम्मेलनमा महिलाहरुले आफ्ना नेपाल देखि अमेरिका आएपछि गरेका संघर्ष तथा सफलता कथा सुनाउदा दर्शक भावुक समेत भएका थिए । महिलाहरुले भोग्नु परेको दुख र संघर्षबाट प्राप्त सफलतालाई कार्यक्रममा सुनाएका थिए ।
उक्त सम्मेलनको लागि अमेरिकाका विभिन्न राज्यबाट महिलाहरुको उल्लेख्य सहभागिता थियो । हरेक वर्ष मार्च ८ तारिखमा मनाइने अन्तर्रा्ष्ट्रिय नारी दिवशको अवसर पारेर उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
यस पटक टेक्ससको नेप्लिज अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्श, एनआरएन अमेरिका राष्ट्रिय संयोजन परिषद् तथा नेपाली वुमन्स ग्लोबल नेटवर्क( नेपाली महिला बिश्व संजाल) ले संयुक्तरूपमा सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए।
अमेरिकामा पहिलो पटक यस्तो बृहत सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो भने उक्त सम्मेलनमा मदन पुरस्कार विजेता साहित्यकार निलम कार्की निहारिकाको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
प्रथम पटक आयोजना गरिएको उक्त सम्मेलनमा ‘महिला नेतृत्व’, ‘सफलता र साहसका कथा’, ‘महिला उद्यमी’ र ‘महिला स्वास्थ्य’ शीर्षकका चार समूहमा छलफल चलाइएको थियो।
‘स्टोरी अफ सक्सेस एण्ड करेज’ बिषयमा न्यू योर्ककी अधिकार संस्थाकी अधिकारकर्मी नर्बदा क्षेत्री, डीसी क्षेत्रकी अधिवक्ता बन्दिता शर्मा दाहाल, कृषि अभियन्ता डा. सुमन रिमाल, महिला सामाजिक कार्यकर्ता डा. विद्या रञ्जित( बिधवा वारिधि ) प्रविधिविज्ञ रश्लिना न्याछ्यो जोशी तथा टेक्सस कै हिंसापीडित गीता शाहले आफ्ना भोगाईका कथाहरु सुनाएका थिए ।
यसैगरी ‘महिला उद्यमी’ विषयक समूह छलफलमा क्यालिफोर्नियाकी निरा गिरी तामाङ ,टेक्सासकी सीता सापकोटा, उद्यमी दीक्षा भट्ट,तथा जर्जियाकी सुष्मा बाराकोटीले उद्यमशीलता तथा सफलताको कथा सुनाएका थिए।
यसै गरि समूह छलफल अन्तर्गत ‘महिला नेतृत्व’ विषयक अमेरिका नेपाल सोसाइटीकी अध्यक्ष प्रभा देउजा, नेप्लिज एशोसिएसन इन साउथ इष्ट अमेरिका जर्जियाकी उपाध्यक्ष अम्बिका लोहनी ,एनआरएनए अमेरिकाकी पूर्वउपाध्यक्ष तथा बाना कि पूर्व अध्यक्ष रविना थापा, एनआरएनकि उपाध्यक्ष उमा कार्की थापा, ,तथा नेपाली अमेरिकन अग्रनाइजेसन अफ ओहायोकी अध्यक्ष डा. एलिना शाक्यलाई सोधिएका जिज्ञाशालाई जवाफ दिदै आफ्ना धारणा समेत राखेका थिए ।
यसै गरि ‘महिला स्वास्थ्य’ विषयक समूह छलफलमा अबुर्द रोग विशेषज्ञ चिकित्सक रश्मी खनाल, दन्त्य रोग विशेषज्ञ चिकित्सक शर्मिला श्रेष्ठ, चिकित्सक रोजी राजभण्डारी लगायतले महिला स्वास्थ्यको बारेमा बोलेका थिए । सम्मेलनमा टेक्सस ड्यालस वरपरका सामाजिक अभियन्ता तथा पुरुषहरुको पनि बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
सफलताको कथाको कार्यक्रम प्रस्तोता कल्पना घिमिरे रहेकी थिइन् भने महिला उद्यम शिलतामा डा. शिलु घिमिरे न्यौपानेले कार्यक्रम संचालन गरेकी थिइन् । यसै गरि स्वास्थ्यमा डा बिष्णु माया उपाध्याय कार्यक्रम प्रस्तोता रहेकी थिइन् ।
यसै गरि स्वास्थ्यमा डा बिष्णु माया उपाध्याय कार्यक्रम प्रस्तोता रहनु भएको थियो ।